इटहरी उपमहानगर: मेयरका अभियान धेरै, काम थोरै
नेपाली पब्लिक मंगलबार, वैशाख २४, २०७६
इटहरी – पूर्वको एक व्यापारिक केन्द्र हो, इटहरी उपमहानगरपालिक। अनि यहाँका मेयर (नगरप्रमुख) हुन्, द्वारिकालाल चौधरी। सामान्य एक कृषक परिवारका उनले आफ्नो मेयर पदको कार्यभार सम्हालेको करिब २ वर्ष पुग्नै लाग्यो। निर्वाचनअघि दिएको अश्वासनका आधारमा मेयरको काम गराइ हेर्ने हो भने यो अवधिमा जस्तो इटहरीले मुहार फेरेको छ, त्यसको तेब्बर गतिमा फेरिने थियो। तर, उनले दिएका आश्वासन पूरा गर्न सकेनन्। काम कम र आश्वासन बढी दिने मेयर चौधरी बेलाबेलामा विवादमा समेत पर्दै आएका छन्। मेरो कार्यकालमा इटहरीले मुहार फेर्छ भन्दै आश्वासन बाँड्दै आफै कम्मर कसेर अभियान चलाएर हिँडेका मेयर चौधरीका काम पछिल्लो समयमा ठप्पजस्तै छन्। उनले चलाएका अभियान अभियानमा मात्रै सीमित भए। प्रस्तुत छ, मेयर चौधरीका केहि प्रतिबद्धता र उनीसँग त्यसै बिषयमा नेपाली पब्लिकका खेमराज सापकोटाले गरेको कुराकानीसहितकाे सामग्री:
प्रतिबद्धता–१, जनता पार्क
मेयर चौधरीले ऐलानी जग्गा हडपेर बनाइएको नेपाल डीभीएम ग्लोबल एकेडेमीको चौरमा जनता पार्क निर्माण गरेर यही वैशाख १ गते उद्घाटन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। गत मङ्सिरमा विवादबीच तामझामका साथ मेयर आफैँले पार्क शिलान्यास गरेका थिए। तर, अहिलेसम्म पार्क निर्माणले गति लिएको छैन। ३ बिघा जग्गामा ५० लाख रुपैयाँ बढीको खर्चमा भ्यु टावर र धरहरासहितको आकर्षक पार्क २०७६ सालको वैशाखसम्ममा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
यस विषयमा मेयरलाई गरिएको प्रश्नोत्तर :
जनता पार्कबाट कति आम्दानी भयो? – कुन पार्कबाट? मङ्सिरमा शिलान्यास गरेको पार्क – ए, त्यसको भर्खर डीपीआरको काम हुँदैछ। शिलान्यास गर्दा २०७६ सालको वैशाखमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्नुभएको थियो। अनि वैशाख १ गते त गइसक्यो होइन र? कुन वैशाख भन्नुभएको थियो? – हैन, हामीले भनेअनुसार नै काम हुँदैछ। यसको प्राविधिक पक्षको काम भइरहेको छ। जग्गाको सम्बन्धमा विवाद पनि भइरहेको छ। हामी अहिले डीपीआरको तयारीमा छौँ। तत्काल चाहिँ यसको निर्माण सक्ने हाम्रो योजना हो।
प्रतिबद्धता–२, खोला अतिक्रमण
मेयर पदमा उठेकै बेला चौधरीले खोलाखोलामा डोजर कुद्छ, खोला अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका घरटहरा भत्किन्छन् र इटहरीलाई डुबान समस्याबाट मुक्त गरिन्छ भनेका थिए। चुनावपछि केही समय त्यो कामले गति पनि लियो तर अब वर्षायाम शुरु भएको छ, घरटहरा भत्काउने विषय त परै जाओस्, इटहरी डुबानको विषय झनै गम्भीर छ। विगत १ वर्ष अगाडिको बाढी र डुबानले इटहरीमा धेरैको कन्तबिजोक बनाएको थियो। त्यस विषयमा मेयर गम्भीर नबन्दा समस्या उस्तै छ। वर्षायाम शुरु भएसँगै इटहरीबासीलाई डुबानको चिन्ता लाग्न थालिसकेको छ।
यस विषयमा गरिएको प्रश्नोत्तर ः
मेयर सा’व, यो वर्ष इटहरीमा कति डुबान हुन्छ? – हामी डुबान कम गर्न लागिपरेका छौँ। गत वर्षजति डुबान हुँदैन। डुबानको मुख्य समस्या खोलानाला अतिक्रमण हो। उक्त अतिक्रमण हटाउँदै डुबानको समस्यालाई पूर्ण रूपमा हल गर्ने आश्वासन बाँड्नुभएको थियो नि? – खोलानाला अतिक्रमणका लागि हामीले केही प्रयास गरेका छौँ। हामी यस विषयमा योजनाबद्ध किसिमले काम गरिरहेका छौँ। अब इटहरीमा डुबान समस्या धेरै रहँदैन।
प्रतिबद्धता–३, सरकारी जग्गा खोजी अभियान
जताततै भूमाफियाको रजाइँ चल्दै गर्दा इटहरीमा पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी ऐलानी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा छ। शहरी क्षेत्रका सरकारी जग्गामा भूमाफियाको बढी चलखेल छ। सरकारी र सार्वजनिक जग्गा छुट्टै नापेर राख्ने गरिएको छैन। सरकारी जग्गाको अभिलेख पनि अलपत्र छ। खोलानाला, पोखरी, डिल, नहर, कुलो, अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा मेयर चौधरी आफैँ कम्मर कसेर खोजी अभियानमा केही समय हिँडे, केही ठाउँमा जग्गा भेटे पनि तर त्यसले गति नलिँदा उनको वाचा पूरा हुन सकेको छैन।
यस विषयमा गरिएको प्रश्नोत्तर :
निकै तामझामसाथ शुरु गरिएको सरकारी जग्गा खोजी अभियान किन रोकियो? – रोकिएको छैन। हामीले संयन्त्र लगाएर उक्त काम गरिरहेका छौँ। सबैतिर आफँै नभ्याइने भएका कारण अरूलाई जिम्मा मात्रै दिइएको हो। रोकिएको छैन। यो निरन्तर सञ्चालन हुन्छ।
प्रतिबद्धता–४, सडक अतिक्रमण
बजार क्षेत्र अनि इटहरीको साँघुरो सडक, त्यसको पेटीमा राखिएको जथाभाबी पसल त्यसमाथि जथाभाबी पार्किङले इटहरीको सडक अस्तव्यस्त छ। त्यसमा स्थानीयले विरोध जनाएपछि मेयर चौधरी आफँै सडकमा निस्किएर हाइवे क्लियर गर्ने भन्दै बाटोमा डोजर चलाए। त्यसका लागि निर्णय नै गरेर मेयर व्यवस्थापनको अभियानमा लागे। सो क्रममा सडकमा भएका रूख बिरुवा काटिए। सडक बनेपछि त्यहाँ नयाँ बिरुवा रोपेर हराभरा बनाउने भनिएको थियो। तर, शुरुमा निकै चर्चामा रहेको अभियान अहिले धेरैले बिर्सिसकेका छन्।
नगर प्रमुखज्यू, कहिले बन्छ त इटहरी? – इटहरी कहिले बन्छ भन्दा पनि हामी बनाउने प्रयासमा लागेका छौँ। देखिने कुरा मात्र विकास हुँदैन, भित्री रूपमा जे जे गरिँदैछन् त्यो सबै विकासकै लागि हो। तत्काल नदेखिने कामले दीर्घकालीन रूपमा नगरको विकासमा सहयोग गर्छ। तपाईं आफैँले निकै तामझामका साथ शुरु गरिएका अभियानलाई किन निरन्तरता दिन सक्नुभएन? – जे काम गरिन्छ त्यो काम गर्दा विशेष र गम्भीर भएर गरिन्छ। गर्दै जाँदा विभिन्न अवरोध पनि आउँछन्। हामीले इटहरी बनाउने सङ्कल्प गरेका छौँ। ढिलो–छिटो मेरो कार्यकालसम्ममा इटहरी बन्छ, बन्छ, बन्छ।
प्रतिबद्धता–५, इटहरी राजधानी
आफैँ इटहरीलाई राजधानी बनाउने भनेर मेयर चौधरी कम्मर कसेर लागे। राजधानी सरोकार समाजको संयोजक पनि आफैँ बने, राजधानी इटहरी भएन भने आन्दोलन गर्नेसम्म बताए। जसअन्तर्गत विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम ल्याए। इटहरीमा इटहरीबासीलाई मतदानसमेत गराए। ९० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त भयो। तर, इटहरीबासीलाई इटहरी राजधानी हुनुपर्ने भनेर मतदान गराउँदा त्यसको विकल्प नै थिएन। प्रदेश एकको राजधानी सोमबार मात्रै विराटनगर तोकिएको छ। यसमा पनि मेयर चुके।
इटहरी राजधानी भएन त नगरप्रमुखज्यू? – पूर्वको केन्द्र भएकाले इटहरी राजधानीका लागि उपयुक्त ठाउँ हो। हाम्रो माग इटहरी राजधानी हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यसका लागि धेरै प्रयास र आन्दोलन पनि गर्‍याै। हामीले मतदान कार्यक्रमदेखि प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझायौँ। तर, प्रदेश सभाले बनाएन त के गर्नु? तपाईंको हालसम्मको कार्यकाल त आश्वासन मात्रै दिएर बित्यो। अब दिइएका आश्वासन कहिले पूरा हुन्छन् त? – मैले भनेँ नि इटहरी एक व्यस्त शहर हो। धैरै समस्या हुन्छन् काम गर्ने सिलसिलामा। त्यसकै अल्झनमा छौँ हामी। म यति भन्छु, हामीले गरेका वाचा हाम्रो कार्यकालमा पूरा हुन्छन्। त्यसै क्रममा मेयरको केही हप्ता अगाडिको दौडाहा कृषकको गाईगोठमा थियो। त्यस क्रममा उनले भनेका थिए, ‘कृषकको समस्या धेरै छन्, समस्या समाधानको पहल गर्ने छु। हुन त म आफैँ कृषक हुँ, मेरो जस्तो समस्या छ त्यस्तै समस्या कृषकको हुन्छ। कृषकका लागि नयाँ परियोजना नगरले ल्याउने छ।’ मेयर चौधरीका अनुसार धेरै अगाडि चर्चामा रहेको विषय रात्रिकालीन बजार हो। जसका लागि उपभोक्ता समिति गठन भएर काम भइरहेको छ, सुरक्षाको व्यवस्थापनमा जोड दिइने छ, इटहरीमा कर्मचारीका कारण ढिलासुस्तीको समस्या विस्तारै हट्नेछ, सार्वजनिक शौचालयको डीपीआर तयार भइसकेको छ, डीभीएम स्कूलले अतिक्रमण गरेको जग्गा नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २४, २०७६ ०९:५४
शनिबार, भदौ २०, २०७७ १८:२४ अब कोरोनाबाट माथि उठ्न नयाँ मेकानिजम जरुरी छ
शनिबार, भदौ २०, २०७७ १८:०३ लकडाउनकै बेला एक हजार श्रमिक रोजगारमा
शुक्रबार, भदौ १९, २०७७ १८:२९ ‘देश विचौलियाले चलाएको छ, वास्तवमा सिस्टम नै फेर्नुपर्छ’